Lamborghini ဝယျဖို့ ကယျလီဖိုးနီးယားပွညျနယျအထိ ခရီးနှငျခဲ့တဲ့ အသကျ ၅ နှဈအရှယျ ကလေးလေး။ – SoShwe
Home/Other/Funny/Lamborghini ဝယျဖို့ ကယျလီဖိုးနီးယားပွညျနယျအထိ ခရီးနှငျခဲ့တဲ့ အသကျ ၅ နှဈအရှယျ ကလေးလေး။
So Shwe November 27, 2021	Funny Leaveacomment
အသကျ ၅ နှဈအရှယျ Adrian Zamarripa ဆိုတဲ့ကလေးငယျဟာ ၃ ဒျေါလာကို အိတျကပျထဲထညျ့ပွီး Lamborghini ဝယျဖို့ ကယျလီဖိုးနီးယားပွညျနယျအထိ ကားမောငျးသှားခဲ့ပါတယျ။ Soshwe စာဖတျပရိသတျကွီးက အသကျ ၅ နှဈအရှယျကလေးလေးက ကားမောငျးတယျဆိုတာ ဟုတျပါ့မလား? လို့ သံသယဝငျနိုငျကောငျး ဝငျနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အသကျ ၅ နှဈအရှယျကလေး ကိုယျတိုငျကားမောငျးပွီး ကယျလီဖိုးနီးယားပွညျနယျအထိ Lamborghini ဝယျဖို့ ခရီးနှငျခဲ့တယျဆိုတာကတော့ အမှနျပါဘဲ။
Adrian ဟာ မိဘနှဈပါးလုံး အလုပျကိုရောကျနတေဲ့အခြိနျမှာ အသကျ ၁၆ နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ အမဖွဈသူ Sidney Estrada နဲ့ အိမျမှာနခေဲ့ရပါတယျ။ Sidney က Adrian ကို ထိနျးနရေငျးကနေ လုပျစရာရှိလို့ ထသှားတဲ့အခြိနျမှာ Adrian လေးက အိမျကကားသော့ကိုယူပွီး ကားမောငျးထှကျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ Sidney ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ Adrian တဈယောကျ ဘယျကနဘေယျလို ကားမောငျးတတျသှားလဲဆိုတာကို ဘယျသူမှမသိပါဘူး။
Adrian လေးကို တဈအိမျလုံးနှံ့အောငျရှာဖှပွေီးတဲ့အခါမှာတော့ မတှတေ့ော့တဲ့နောကျ Sidney က လုပျငနျးခှငျကိုရောကျနတေဲ့ မိဘနှဈပါးကို အသိပေးခဲ့ကာ မိဘနှဈပါးလုံးဟာလညျး Adrian လေးကို ရှာဖှနေိုငျဖို့အတှကျ နီးစပျရာဌာနတှကေို အကူအညီတောငျးခံခဲ့ရပါတယျ။ ကံကောငျးခငျြတော့ Utah Highway Patrol က ဝနျထမျးတဈဦးက ကလေးငယျမောငျးလာတဲ့ယာဉျကို ရပျတနျ့စခေဲ့ပွီး အကြိုးအကွောငျးမေးပွီးနောကျမှာတော့ မိဘဖွဈသူတှကေို ဖုနျးဆကျအသိပေးခဲ့ပါတယျ။သတငျးမီဒီယာတှရေဲ့ လကျခကျြကွောငျ့ အသကျ ၅ နှဈအရှယျကလေးရဲ့ ၃ ဒျေါလာနဲ့ Lamborghini ဝယျဖို့ ကယျလီဖိုးနီးယားပွညျနယျထိ ကိုယျတိုငျကားမောငျးပွီး ခရီးနှငျလာတယျဆိုတဲ့သတငျးကို နိုငျငံတဈဝှမျးက သတငျးကွညျ့ရှုသူတှကေ စိတျဝငျစားခဲ့ပါတယျ။
Adrian လေးရဲ့သတငျးကိုကွားသိရတဲ့ Xcite Satellite မိုဘိုငျးဖုနျးကုမ်ပဏီပိုငျရှငျ Jeremy Neves က သူ့ရဲ့Lamborghini Huracan ပျေါမှာ လိုကျပါစီးနငျးခှငျ့ပေးခဲ့ပွီး Jeremy က “Adrian လေးကို ကြှနျတော့ရဲ့Lamborghini Huracan ပျေါမှာ လိုကျပါစီးနငျးခှငျ့ပေးခဲ့ခွငျးက သူ့ရဲ့အိမျမကျကို အကောငျအထညျဖျောဖို့၊ သူ့ရဲ့ပနျးတိုငျကိုရောကျရှိနိုငျဖို့ ခှနျအားပေးသလိုဖွဈစနေိုငျမယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ။” ဆိုပွီး CNNသတငျးဌာနကို ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
Lamborghini ဝယ်ဖို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အထိ ခရီးနှင်ခဲ့တဲ့ အသက် ၅ နှစ်အရွယ် ကလေးလေး။
အသက် ၅ နှစ်အရွယ် Adrian Zamarripa ဆိုတဲ့ကလေးငယ်ဟာ ၃ ဒေါ်လာကို အိတ်ကပ်ထဲထည့်ပြီး Lamborghini ဝယ်ဖို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အထိ ကားမောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ Soshwe စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးက အသက် ၅ နှစ်အရွယ်ကလေးလေးက ကားမောင်းတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါ့မလား? လို့ သံသယဝင်နိုင်ကောင်း ဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက် ၅ နှစ်အရွယ်ကလေး ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အထိ Lamborghini ဝယ်ဖို့ ခရီးနှင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ အမှန်ပါဘဲ။
Adrian ဟာ မိဘနှစ်ပါးလုံး အလုပ်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အမဖြစ်သူ Sidney Estrada နဲ့ အိမ်မှာနေခဲ့ရပါတယ်။ Sidney က Adrian ကို ထိန်းနေရင်းကနေ လုပ်စရာရှိလို့ ထသွားတဲ့အချိန်မှာ Adrian လေးက အိမ်ကကားသော့ကိုယူပြီး ကားမောင်းထွက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sidney ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ Adrian တစ်ယောက် ဘယ်ကနေဘယ်လို ကားမောင်းတတ်သွားလဲဆိုတာကို ဘယ်သူမှမသိပါဘူး။
Adrian လေးကို တစ်အိမ်လုံးနှံ့အောင်ရှာဖွေပြီးတဲ့အခါမှာတော့ မတွေ့တော့တဲ့နောက် Sidney က လုပ်ငန်းခွင်ကိုရောက်နေတဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို အသိပေးခဲ့ကာ မိဘနှစ်ပါးလုံးဟာလည်း Adrian လေးကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက် နီးစပ်ရာဌာနတွေကို အကူအညီတောင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ Utah Highway Patrol က ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ကလေးငယ်မောင်းလာတဲ့ယာဉ်ကို ရပ်တန့်စေခဲ့ပြီး အကျိုးအကြောင်းမေးပြီးနောက်မှာတော့ မိဘဖြစ်သူတွေကို ဖုန်းဆက်အသိပေးခဲ့ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ လက်ချက်ကြောင့် အသက် ၅ နှစ်အရွယ်ကလေးရဲ့ ၃ ဒေါ်လာနဲ့ Lamborghini ဝယ်ဖို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ထိ ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီး ခရီးနှင်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းက သတင်းကြည့်ရှုသူတွေက စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။
Adrian လေးရဲ့သတင်းကိုကြားသိရတဲ့ Xcite Satellite မိုဘိုင်းဖုန်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် Jeremy Neves က သူ့ရဲ့Lamborghini Huracan ပေါ်မှာ လိုက်ပါစီးနင်းခွင့်ပေးခဲ့ပြီး Jeremy က “Adrian လေးကို ကျွန်တော့ရဲ့Lamborghini Huracan ပေါ်မှာ လိုက်ပါစီးနင်းခွင့်ပေးခဲ့ခြင်းက သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့  ၊ သူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့ ခွန်အားပေးသလိုဖြစ်စေနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။” ဆိုပြီး CNNသတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Previous ကွငျယာဖကျရဲ့ ရကျရောမှုကို စမျးသပျတဲ့အနနေဲ့ ဆှမြေိုး ၂၃ ယောကျကို စားသောကျဆိုငျ ချေါဆောငျသှားတဲ့ အမြိုးသမီးရဲ့အဖွဈ။
Next ကမ်ဘာ့စိတျလှုပျရှားဖို့အကောငျးဆုံး ရငေုပျစှနျ့စားဖို့အတှကျ နရောကောငျးမြား။